I-Metal ekhoneni ngomuthi iphaneli efanisa umuthi wemvelo noma igoli elizungezile. Lezi zinto zenziwe ngensimbi egqinsiwe nge-polymer yokugqoka. Kuze kube manje, insimbi eyenziwa ngezinkuni iyona efuna kakhulu ngoba ishibhile kunezinkuni zemvelo futhi ayidingi izindleko zokuvuselela. Isetshenziselwa ukubhekana nezindawo zamabhizinisi, ezentengiselwano nezesidlangalaleni, kanye nezindlu zokuqasha izindlu, izindlu zangasese, izindlu zezindlu. Lezi zinto zinikeza isakhiwo ukubukeka okubonakalayo futhi sivikela emiphumeleni yezimo zomoya.
Isici sokwebunjwa kwensimbi ehamba ngaphansi kwebha noma log kuyinto ukuma kwayo, okuyinto simulating udonga log cabin. Isisekelo yipaneli yensimbi ehlanganisiwe enejamo elungile 0.4-0.7 mm obukhulu, ekhiqizwa ngokugxila. Ububanzi bayo obusebenzayo buyi-188 mm, ububanzi bayo buyi-211 mm, nobude buyi-0.5-6 m.
Lo mkhiqizo unqanyuliwe futhi uncomekile. Ukunyuka kwesibindi kuvikela iphaneli lokudonsa kusuka ekubhubhiseni, futhi ukukhuphula kwandisa ukuncibilika kwe-substrate kuya ungqimba oluvikelayo lwe-polymer. Ngenxa yalokhu, kusetshenziselwa ama-polymers afana ne-Pural, i-Plastisol, i-Polyurethane, i-Polyester, engenzi nje kuphela umsebenzi wokuzivikela, kodwa futhi ukuqinisekisa ukukhangiswa kwezinto. Izinhlobo zayo eziphakeme kakhulu nazo zihlanganiswe ne-varnish evikelayo.
Incazelo nenani lezinto
I-metal siding-beam yenziwa ngemibala yezinkuni zemvelo ezihlukahlukene. Amapaneli anemikhiqizo eyengeziwe engase ibe nombala womkhiqizo oyinhloko noma ahluke kuwo. I-metallosiding iyisisindo esincane, kulula ukufaka futhi kulula ukuthutha. Izici zayo zobuchwepheshe zihlangabezana nezidingo eziphezulu.
Izindleko zensimbi zensimbi zingakanani? Intengo incike kwimingcele ehlukene. Ukwakheka kwendlu ngendwangu yokulinganisa izingodo ezizungezile kuyoba eshibhile kakhulu kunokugqokwa kwezindonga ngezinkuni zemvelo. I-Metal siding, intengo yakhe ibingama-ruble angu-280-350 kuphela ngo-1 m 2 (kuye ngokuthi uhlobo lokufihla), ivumela izindonga "ukuphefumula".
Insimbi eyenziwa ngezinkuni inezinzuzo ezinjalo:
Kuyinto enobungozi futhi iphephile empilweni yomuntu;
Ingabe ihlala isikhathi eside futhi ihlala isikhathi eside, impilo yayo yokusebenza iyineminyaka engama-50;
Unokumelana nokubola, izinguquko zokushisa nokushisa;
Kulula ukufaka nokulondoloza.
Ubuchwepheshe bokufakwa kwensimbi-siding ngaphansi kwesihlahla kuhlinzekela izigaba ezinjalo: ukulungiswa kwezindonga kanye nokubhekwa kwazo.
Uma kukhona isikhunta ebusweni, ngemva kokususa, phatha udonga nge-antiseptic. Ngaphambi kokufaka i-siding yensimbi, kufanele ufake i-crate yensimbi noma yokhuni ezindongeni. Ukuze ukwenze, sebenzisa iphrofayili yensimbi egxiliwe noma amabhlogo enkuni ene-cross cross 40 kuya ku-50 mm. Ibanga lesiteji le-crate ngu-400 mm.
Ukwakhiwa kohlaka lwezingodo zensimbi, isithombe esinikezwe kulesi sihloko, senziwe kanje. Emakhonweni, asetshenziswe kusengaphambili ezindongeni zendlu, amabakaki ahleliwe.
Lapho isakhiwo sigxiliwe phezu kwabanikazi, ukwaziswa okushisa okushisa kufakwe futhi kuhlanganiswe nefilimu engenawo umoya. Khona-ke kubakaki ziboshwe imigoqo yamapulangwe noma amaphrofayili ensimbi, okuyisisekelo sekhredithi. Uma izindonga zinendawo enkulu, khona-ke ukuqina kufaka imigoqo yokuphambana.
Ukwakhiwa kwe-flooring akudingekile uma i-metal siding ngaphansi kwesihlahla isetshenziselwa ukuqedela izakhiwo zemali ezinokukhonjiswa noma izitini. Khona-ke ingafakwa ngqo kulezi zisekelo.
I-Metal siding, imfundo yokufaka engasho ukuthi ukwenza noma yiziphi izenzo eziyinkimbinkimbi, kulula ukuyifaka. Le nqubo ayifani neze nokuphakanyiswa kwamanye amamodeli. Ungakwazi ukwenza ukugoqa ngokwakho, ngaphandle kokwazisa ochwepheshe, uma ulandela ubuchwepheshe.
Ngakho-ke, ukufakwa kwensimbi engaphansi kwesihlahla kwenziwa kusuka phansi. Engxenyeni engezansi, ngenhla kwesisekelo sakhiwo, ibha yokuqala isethwe ngokwezinga. Yigcine, njengama-panels alandelayo, ngezikrini ezikhethekile ezingagcini ukumisa, kodwa shiya igebe lika-0.8 mm. Ipuleti yokuqala ihloselwe ukukhiya, okuyi-plate yokuqala, bese uyilungisa. Umugqa olandelayo unamathiselwe ngemuva kokufakiwe kwangaphambili. Umugqa ophezulu ohlangothini olulodwa luhlanganiswe phansi, futhi kwezinye - izikhonkwane zokuzibamba ezithintekayo.
Engxenyeni engenhla yodonga, ibha yokulungisa noma i-tide ifakiwe. Amakhonksi ahlanganiswe ama-slats akhethekile noma amaphuzu e-PVC alingisa ukuphela kwezingodo. Kuye ngokuma, izakhi ezengeziwe, njengezingxenyeni zangaphandle nezangaphakathi, zingafakwa ngaphambi kokufaka amaphaneli noma emva kokuzifaka.
Ukwenza uhlaka oluhle lwezindonga eziphezulu kakhulu akulula, uma usebenzisa i-metal siding ngalokhu. Isithombe sendlu, esenziwe ngalezi zinto, kulesi sihloko.
Ukubheka i-metal kuyona engcono kakhulu kuzo zonke izinhlobo ezikhona. Le nto yokugqoka ayidingi isondlo esikhethekile ngesikhathi sokusebenza. Yisuse othulini noma okunye okungahambisani nokusetshenziswa kwamanzi ahlanzekile.
Kusukela emonakalweni womshini kungagcinwa ngokwenza ucingo oluphansi nxazonke zendlu, nokufaka uhlelo lokugeleza. Uma, noma kunjalo, ukulimala kwenzekile ekugqokeni, kufanele kulungiswe ngopende olufanele.
Ukusebenzisa umcengezi wensimbi ngaphansi kwesihlahla, ungasheshe wenze isakhiwo esihle, esizohlinzeka ngokuvikelwa okuthembekile kwezakhiwo.
Indawo yokudlela "Tsytsyla": incazelo, ukubuyekezwa
Ukugcwalisa i ophaya, inkukhu kwesibindi: zokupheka best futhi ikakhulukazi ukupheka
Ukwenza ehholo efulethini: awusizo izixazululo ezithakazelisayo